चीनमा अर्को रोगको प्र’कोप, यस्ता छन यो रोगका लक्षणहरु ! सबैले जानिराखौ – Life Nepali
काठमाडौं, असोज ५ । विश्व अहिले को रोनाभा इरसको म हामारीबाट आ क्रान्त छ । चीनको वुहानबाट को रोनाभा इरस फै लिएको मानिन्छ ।यतिबेला चीनमा एक अर्को रोग ब्रुसेलोसिसको पनि प्र कोप देखापरेको छ । गान्सु प्रान्तको राजधानी लान्झोमा तीन हजारभन्दा बढी व्यक्ति यसबाट सं क्रमित भइसकेका छन् । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
ब्रुसेलोसिसका कारण हालसम्म कोहीपनि व्यक्तिको मृ त्युको घ टना भने बाहिर आएको छैन ।*******
Previous भोलिदेखि सरकारले सबै विद्यार्थीहरुलाई नि:शुल्क इ’न्टरनेट दिदै, यसरी लिनुहोस फाइदा !
Next भर्खरै पत्ता लाग्यो कोरोना भाइरसको नयाँ लक्षण ! यस्तो छ नयाँ लक्षण , सबैले जानिराखौ !